Qorax dhaca ugu wanaagsan Kariibiyaanka | Wararka Safarka
Maria | | America, safarka
Ma sahlana in la gaaro heshiis la isku raacsan yahay marka la go'aaminayo kuwa ugu qorrax-dhaca ugu wanaagsan Kariibiyaanka. In kasta oo ay run tahay inay jiraan meelo ka mid ah oo ku dhowaad wadarta guud loo wada dhan yahay; boggaga kale waxay kuxiranyihiin xusuusteenii fasaxa cajiibka ah ama dabeecadooda cajiibka ah awgeed, waxay badanaa ka muuqdaan shabakadaha bulshada si isdaba joog ah.
4 Jasiiradda Margarita (Venezuela)
Xeebta Gobolka Quintana Roo waxaa ku yaal Tulum oo loo yaqaan magaalada waabari ee Mayaanku waxay u maleeyeen inay tahay meel aad u fiican oo laga bilaabo maalinta la daawanayo qorraxdu ka soo baxdo Badda Caribbean-ka. Qorrax dhaca Tulum waa sida quruxda badan. Kumanaan booqdayaal ah ayaa halkan ka taga si ay u ogaadaan xeebteeda quruxda badan ee buluugga ah, qafisyada ay ku quustaan, iyo wixii ka sarreeya, burburka Mayan, macbud dhagax ku yaal oo badda agteeda ah oo ka yaabisay reer Spain markii ay soo gaareen xeebahan.
Mid ka mid ah aragtida qorrax dhaca ee ugu quruxda badan Havana waxaa laga helaa aragtida laga soo qaado Baarkinka Taariikhda Milatariga ee Morro-Cabaña. Qeyb ka mid ah waxa laga yaabo inuu ahaa dhismihii ugu adkaa ee difaac ee boqortooyadii Isbaanishka. Beertan milatari ee ku taal aagga Old Havana, waxay ka kooban tahay laba qalcadood oo adag: El Morro, oo leh laydhkeeda astaamaha, iyo La Cabaña, oo ah xero milatari oo caan ku ah aragtideeda Malecón iyo munaasabadda toogashada rasaasta. dharka militariga ee qarnigii XNUMX-aad ayaa dib u soo saaraysa madfac ka soo dhacaya dekedda Havana oo tilmaamaysa xiritaanka albaabbada derbiga.
Haddii aad tahay qof jecel dabeecadda iyo sawir qaadista, waxaad ku noolaan doontaa daqiiqad lama ilaabaan ah daawashada qorrax dhaca Punta Cana. Halkan waxaa lama huraan ah in lagu kordhiyo maalinta oo lagu raaxeysto xeebaha cajiibka ah ee Kariibiyaanka oo aad ka fiirsato dhammaan waxyaalaha cirka ee ay qorraxdu hesho markay qorraxdu dhacdo hoos ayuu u dhacayaa. Maaha wax kadis ah in qorrax dhaca Punta Cana uu ka mid yahay kuwa ugu fiican adduunka. Waxba kama fiicna inaad ku raaxeysatid cabitaanka xeebta.
Jasiiradda Margarita (Venezuela)
Playa Caribe wuxuu ku yaal Isla Margarita, shan daqiiqo oo kaliya ayuu u jiraa magaalada Juan Griego. Waa deegaan qurux badan oo buuro iyo geedo qumbaha ah oo aad ku daawan karto mid ka mid ah qorrax dhaca ugu wanaagsan Kariibiyaanka. Xeebtani waxay leedahay biyo hoose iyo barar dhexdhexaad ah, oo ku habboon hareeraha.
Hawlaha kale ee lagu qabanayo Playa Caribe waa safar gaaban oo doomaha lagu raaco ah oo ay weheliyaan kalluumeysatada maxalliga ah ama isboortiga biyaha sida safarka mooska.
Jawiga raaxada leh ee Jamaica waa jawiga ugu habboon ee lagu raaxeysan karo qorrax dhaca bartamaha Kariibiyaanka. Waxaa jira meelo aan la tirin karin oo laga kala xusho markay tahay doorashada booska qorrax dhaca ugu fiican. Waad dooran kartaa inaad u kacdo xagga sare ee Lover's Leap, oo ah meel caan ah oo qurux badan oo indha indheysa Treasure Beach, hubinta aragtiyaha cajiibka ah. Dhinaca kale, Negril ayaa laga yaabaa inuu yahay meesha ugu caansan ee laga daawado qorrax dhaca. U hubso inaad u kacdo Rick's Café si aad u daawato qorraxdu hoos ugu dhacdo codadka nasteexo ee reggae.
Haddii aad dooneysid inaad ku dhex mushaaxdo bacaad jilicsan oo aan dhammaad lahayn, ka cuno makhaayadda xeebta ku habboon ee leh is biirsaday, ama si fudud u raadso meel deggan oo aad fariisato oo aad ku qaadatid hareeraha qorraxdu u dhacdo, waxaad hubtaa inaad markhaati ka tahay qorrax dhaca cajiibka ah jasiiradda Barbados. Waa suurtagal in la arko qorrax dhac qurux badan oo ka yimaada Miami Beach, The Gap, ama meel kasta oo ka mid ah looxyada xeebta ee South Coast, laakiin u jiheysta meel kasta oo ka mid ah xeebta West Coast ee cajiibka ah si aad u aragto waxa ugu fiican ee ay Barbados bixiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Qorrax-dhaca ugu wanaagsan Kariibiyaanka